Qurxiinsa Hujeeka Saagi - LibreOffice Help
Saagi - Kutaa Hujeekaa filadhu
1.1 Cita sararaa
1.2 Muraa Tarjaa
1.3 Xumuura Fuulaa
1.5 Lakkoofsa fuulaa jijjiiri
1.6 Lakkoofsa fuulaa
Keewwata haaraa tokko uumu osoo hinbarbaachisin, sarara irra jiru xumureeti, barruu mirga qareetti argamu gara sarara itti aanuutti siqsa.
Akkasuumaas Shift+galchi dhibuun qurxiinsa sararaa saaguu ni dandeessa.
Muraa tarjaa hujeekaa saageeti, (teessuma tarjaa addaa addaa keessatti), akkasumaas barruu mirga qareetti argamu gara jalqaba tarjaa isa itti aanuutti siqsa. Muraan tarjaa hujeekaa, daangaa maxxansalaa gubbee tarjaa haaraatti argamu tokkoon ibsama.
Xumuura fuulaa hujeekaa erga saagee booda barruu mirga qareetti argamu gara jalqaba fuula itti aanuutti siqsa. Xumuurri fuulaa saagamee daangaa maxxansalaa gubbee fuula haaraatti argamu tokkoon ibsama.
Xumuraa fuulaa tokko saaguuf malli biroon ammoo, Ctrldhibuu+Enter fayyadamudha. Haata'u malee, fuula itti aanuu akkaataa biroo qabsiisuuf, xumura fuulaa hujeekaa saaguuf ajaja bafataa fayyadamuu dirqamta.
Lakkoofsa fuulaa isa xumuraa fuulaa hujeekaatti aanuun ifteessame ramada. Filannoon kun kan jiraatu akkaataa fuulaa biroo fuula isa xumura fuulaa hujeekaatti aanuuf yoo ati ramade qofa.
Qurxiinsa hujeekaa mulisuuf, Mul'annoo - Arfii Maxxansalaa filadhu.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.1/Writer/Insert_Manual_Break/om&oldid=700295"
This page was last edited 07:04:16, 2014-02-20 by LibreOffice Help user WikiSysop.